३२ वर्षपछि पूरा भएको बाइडेनको ह्वाइट हाउस सपना :: Setopati
३२ वर्षपछि पूरा भएको बाइडेनको ह्वाइट हाउस सपना अमेरिकाको पहिलो महिला उपराष्ट्रपति भएकी कमला ह्यारिस को हुन्?
अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिका रूपमा बुधबार ह्वाइटहाउसमा सपथ लिँदै जो बाइडेन। तस्बिरः न्यूयोर्क टाइम्स
गत नोभेम्बर ३ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लीकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराएका डेमोक्रेट उम्मेदवार बाइडेनले आज शपथ लिएका हुन्। उनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जन रोबर्ट्सले सपथ ग्रहण गराएका छन्।
कमला ह्यारिसले जो बाइडनसँगै उपराष्ट्रपति पदको सपथ लिएकी छन्। उनी उक्त पद निर्वाचित प्रथम महिला हुन्। उनलाई सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सोनिया सोटोमेअरले सपथ ग्रहण गराएकी थिइन्।
योसँगै ७७ वर्षीय बाइडेनले सबभन्दा पाको उमेरमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुने रेकर्ड पनि तोडेका छन्।
आजैदेखि उनले अमेरिकाको ४६औं राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यभार सम्हाल्नेछन्।
बाइडेन सन् १९७२ मा २९ वर्षको उमेरमा डेलावेर राज्यबाट सिनेटर निर्वाचित भएका थिए। त्यो बेला धेरैले उनलाई ह्वाइट हाउसका लागि योग्य 'मटेरियल' अर्थात् भविष्यमा राष्ट्रपति बन्न लायक ठानेका थिए। अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन ३५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ।
सिनेटरका रूपमा बाइडेनको भाषण गर्ने कलाको खुबै तारिफ हुन्थ्यो। उनको फरसाइलो व्यक्तित्व, सबैसँग घुल्न सक्ने क्षमता र वाककला हेरेरै धेरैले उनलाई सुरूदेखि नै राष्ट्रपतिका लागि योग्य 'मटेरियल' भनेका थिए।
मिडियाले भने उनको त्यही क्षमतामाथि प्रश्न उठायो। भाषण गर्ने शैली र कतिपय विषयवस्तु अरूबाट 'चोरेको' आरोप लाग्यो। यहाँसम्म कि, उनी कमजोर विद्यार्थी रहेको र विश्वविद्यालयको थेसिससमेत चोरी गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो।
उनीसँग वासिङ्टनको राजनीतिक जटिलताबीच काम गरेको अनुभव कम थियो। विदेश नीतिमा त झनै कुनै अनुभव थिएन। यिनै विषयलाई लिएर उनको आलोचना हुने गरेको थियो। त्यो बेला रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका जोन मकेन विदेश नीतिका 'भेटेरान' नै मानिन्थे। उनी सन् १९८२ देखि नै एरिजोना राज्यबाट सिनेटर निर्वाचित हुने गरेका थिए।
डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र 'मोडरेट' र 'प्रगतिशील' गरी दुई मुख्य धार छन्।
प्रगतिशील धारको नेतृत्व बर्नी स्यान्डर्स, एलिजावेथ वारेनहरूले गर्छन् भने बाइडेन मोडरेट धारका प्रमुख अनुहार हुन्। प्रगतिशीलहरू लोकतान्त्रिक विधिभित्रै रहेर राज्यका कतिपय संरचना र नीतिको क्रान्तिकारी परिवर्तनको वकालत गर्छन् भने 'मोडरेट'हरू त्यति धेरै परिवर्तन अमेरिकी समाजले पचाउँदैन र त्यस्ता नीति लिएर चुनाव जित्न सकिन्न भन्नेमा विश्वास गर्छन्।
ट्रम्पले डेमोक्र्याटबाट खोसेका ती राज्य फिर्ता ल्याउन 'म नै सबभन्दा लायक मानिस हुँ' भन्ने उनको तर्क थियो। ओबामाले जितेका यी तीनै राज्य हिलारीले पनि जितेकी भए उनी राष्ट्रपति बन्ने थिइन्।
यी तीन राज्य र वरिपरिको क्षेत्रलाई 'रस बेल्ट' भनेर चिनिन्छ। उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यदेखि नै अमेरिकाको औद्योगिक क्रान्तिमा यो क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेल्यो। ठूला-ठूला उद्योग र कलकारखानाहरू मिचिगन, विस्कन्सिन, पेन्सलभेनिया, ओहाइयो, इलिनोए र न्यूयोर्कको केही क्षेत्रमा खुलेका थिए। तिनले अमेरिकाको औद्योगिकीकरण र समृद्धिमा ठूलो भूमिका खेले।
ती श्रमिकलाई नफर्काइ डेमोक्र्याटिक पार्टीले मिचिगन, विस्कन्सिन र पेन्सलभेनियाजस्ता राज्यमा फेरि जित हात पार्न सक्दैनथ्यो। 'म मजदुरहरूको साथी हुँ र यी राज्य जित्न सक्छु' भन्ने बाइडेनको आत्मविश्वास सही साबित भएको छ।
त्यसबाहेक बाइडेनले ट्रम्पलाई 'रेकर्ड पपुलर मत' को अन्तरले जितेका छन्। बाइडेनले ट्रम्पभन्दा ४० लाखभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाएका छन्। जबकि सन् २०१६ मा ट्रम्पले राष्ट्रपति जिते पनि हिलारी क्लिन्टनभन्दा २९ लाख मत कम पाएका थिए।
अमेरिकाको पहिलो महिला उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस बुधबार सपथग्रण कार्यक्रममा। तस्बिरः न्यूयोर्क टाइम्स।
योभन्दा ठूलो अर्को रेकर्ड बाइडेनले यसपटक बनाएका छन्— अमेरिकाको इतिहासमा पहिलोपटक महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छन्। भारतीय आमा र जमैकन बाबुकी सन्तानका रूपमा क्यालिफोर्नियामा जन्मिएकी कमला ह्यारिस अमेरिकाको पहिलो महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छन्। उनले पनि आजै सपथ लिएकी छन्।
अमेरिकाको पहिलो महिला उपराष्ट्रपति भएकी कमला ह्यारिस को हुन्?
हेर्नुहोस् सपथ ग्रहणको प्रत्यक्ष प्रशारण सौजन्यः एबिसी न्यूज
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ७, २०७७, ११:३०:००